Nhau - Iwe unonzwisisa here iyo Ultrasonic Impact Kurapa?
Iwe unonzwisisa here iyo Ultrasonic Impact Kurapa ?
High Frequency Mechanical Impact (HFMI), inozivikanwawo seUltrasonic Impact Kurapa (UIT), ndeye yakakwira-frequency weld inobata kurapwa yakagadzirirwa kugadzirisa kuneta kusagadzikana kwezvimiro zvine welded.Mune mazhinji mafekitori mafomu maitiro aya anozivikanwawo se ultrasonic peening (UP ).
Iyo inotonhora michina kurapwa iyo inosanganisira yekurova iyo weld chigunwe netsono yekugadzira iyo yekuwedzera iyo yayo nharaunda uye kuunza inosara inomanikidza kushungurudzika.
Muzhinji, iyo yekutanga UP system inoratidzwa inogona kushandiswa pakurapa kwesimbi chigunwe kana welds uye yakakura nzvimbo dzepasi kana zvichidikanwa.
Vakasununguka Vanofambisa Vanorova
Iyo UP michina yakavakirwa pane inozivikanwa kubva kuma40's ezana ramakore rapfuura tekinoroji mhinduro dzekushandisa anoshanda misoro ine zvakasununguka zvinofambiswa varwi vekusimbisa sando. Panguva iyoyo uye gare gare, maturusi akati wandei akasimba ekushandisa varwi vanofambiswa zvakasununguka zvakagadzirirwa kurapwa kwemidziyo uye zvinhu zvakasunganidzwa nekushandisa pneumatic uye ultrasonic michina. Kurapa kunonyanya kushanda kunopihwa kana varatidziri vasina kubatana nechokuita asi vanogona kufamba vakasununguka pakati peactuator uye nezvinhu zvakarapwa. Izvo zvishandiso zvekukanganisa kurapwa kwezvinhu uye zvinhu zvakasunganidzwa zvine mahara anotakurika anotakurika ayo akaiswa mumubati anoratidzwa. Muchiitiko cheinonzi yepakati-element element-striker (s) simba re 30 - 50 N chete inodiwa pakurapwa kwezvinhu.
Chikamu chemaonero kuburikidza nematurusi ane vakasununguka vanofambika varatidzi ekurapa kwepasire kurapa.
Iyo inoratidza yakajairwa seti yemyore nyore kutsiva anoshanda misoro ine vakasununguka vanofambika varatidzi veakasiyana mashandisirwo eP UP.
Seti yemisoro yekushandurana inoshanda yeUP
Munguva yekurapa kweiyo yakakwenenzverwa, anorwisa anonamira mugeji diki pakati pekuguma kweiyo ultrasonic transducer uye iyo yakarapwa specimen, inokanganisa nzvimbo yakarapwa. Rudzi urwu rwekukwirira kwakawanda mafambiro / kukanganisa mukubatana neakakwira frequency oscillations anokonzereswa muzvinhu zvakarapwa zvinowanzonzi iyo ultrasonic kukanganisa.
Tekinoroji uye Midziyo yeUltrasonic Peening
Iyo ultrasonic transducer oscillates pane yakakwira frequency, ine 20-30 kHz ichijairika. Iyo ultrasonic transducer inogona kunge yakavakirwa pane chero piezoelectric kana magnetostrictive tekinoroji. Chero ipi tekinoroji inoshandiswa, iyo yekupedzisira mugumo weiyo transducer ichave oscillate, kazhinji ine amplitude ye20 - 40 mm. Munguva yekushomeka, iyo transducer tip inobata vanorova (s) pamatanho akasiyana muiyo oscillation kutenderera. Anorova (s) anozokanganisa nzvimbo yakarapwa. Iko kukonzeresa kunoguma nekushandurwa kwepurasitiki kwenzvimbo dzechiso chezvinhu. Izvi zvinokanganisa, zvinodzokororwa mazana kuzviuru zvenguva pasekondi, mukubatana neakakwira frequency oscillation inokonzereswa muzvinhu zvakarapwa zvinoguma nemhedzisiro yezvibatsiro zveP.
Iyo UP inzira inoshanda yekubvisa zvinokuvadza zvakasara kushushikana uye kuunza kwakanakisa kwekumanikidza kwekusara kwekushushikana munzvimbo dzepamusoro dzezvikamu uye zvinhu zvakasungwa.
Mukuvandudzika kwekuneta, zvinobatsira zvinoitwa zvakanyanya nekuunza iwo anodzvinyirira akasara ekumanikidza muzvikamu zvepamusoro zvesimbi uye maalloys, kuderera kwekushushikana kwekushushikana munzvimbo dzechigunwe chetsoka uye kusimudzira kweanogadzira epamhepo pamusoro pechinhu.
Maindasitiri Kunyorera kwe UP
Iyo UP inogona kunyatso shandiswa kune kuneta hupenyu kuvandudza panguva yekugadzira, kugadzirisa uye kugadzirisa kwezvinhu zvakasungwa zvinhu uye zvivakwa. Iyo UP tekinoroji nemidziyo zvakabudirira kuiswa mune akasiyana maindasitiri mapurojekiti ekuvandudza uye weld kugadziridzwa kwezvikamu uye zvinhu zvakasungwa zvinhu. Idzo nzvimbo / maindasitiri uko UP yakashandiswa zvinobudirira zvinosanganisira: Njanji uye Highway Mabhiriji, Zvivakwa zvekuvaka, Kuvaka Ship, Mining, ZveMotokari uye Aerospace.